“ဟင့်အင်း“ ပြောတတ်အောင် သင်ယူရဦးမယ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » “ဟင့်အင်း“ ပြောတတ်အောင် သင်ယူရဦးမယ်
“ဟင့်အင်း“ ပြောတတ်အောင် သင်ယူရဦးမယ်
Posted by နည်ရဲဇော် on Oct 16, 2011 in Creative Writing, Drama, Essays.. | 18 comments
မှန်ပါတယ် နည်ရဲဇော် ရေ။
အားနာတတ်တာ အားနည်းချက်တစ်ခု လို့ထင်ပါတယ်။
စိတ်ဓါတ်ပျော့ညံ့လို့ အားနာတတ်တာလား မသိပါဘူး။
ကျွန်တော် လည်းခင်ဗျားလိုပဲ ငြင်းသင့်တာကို အားမနာပဲ
ငြင်းနိုင်အောင်ကြိုးစားနေပါတယ် ဗျာ။ ကျေးဇူးပါ။
အင်း ဟုတ်ကဲ့လုပ်မိပြီးမှ ဒီဟာကိုလုပ်ပေးဖို့မလွယ်တော့လုို့ မျက်နှာ ပျက်ပျက်နဲ့ပြန်ငြင်းရတာတွေ
ရှိတယ်။ တခါတလေလဲ ကြိတ်မှိတ်ပြီးလိုက်လျော လိုက်ရတယ်။
လာစားပါအုံးလို့ခေါ်ရင် နှစ်ခါလောက်တော့ငြင်းပါတယ်၊လောကွတ်လုပ်ပြီး သုံးခါလောက်ခေါ်လိုက်ရင်
ကိုယ်စားသောက်နေတဲ့အချိန်ဧည့်သည်လာလို့ ၀င်စားဖို့ခေါ်ရင် နှစ်ခါလောက်ငြင်းတဲ့သူဆိုရင်
အော် သူမစားချင်လို့ငြင်းနေတာပဲဆိုပြီး အားနာလို့ဆက်ပြီးမခေါ်တော့ပါဘူး၊ ဟီး…ဟီး….။
အားနာလိုမပြောတာ ” အ “တယ်မထင်ပါနှင့်ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်လေးလိုပေါ့
ကျွန်တော်လဲ အားနာတတ်တဲ့ သူ တစ်ယောက်ပဲဗျ ။ ( ဆားဗက်သွား လိုက်ရင် ဖရီးကြီးပဲ ) ။ အားနာရတဲ့အကြောင်းရင်း က သဘောကောင်းတဲ့ စိတ်လေးက စတယ် ထင်တာပဲဗျာ ။ ဟိုဘက် ကလဲ ကျေးဇူး ပဲဆိုတဲ့ စကားလေး တစ်လုံးနှင့်ပီးသွားရော် ။ ဟိုဘက် ကိုလဲ အပြစ်ပြောလို့ မရဘူးထင်တယ်ဗျ ။ ( အားနာတတ် တဲ့သူရဲ့ အပြစ်လိုပြောရမယ်ထင်တယ် ) ။ ကျွန်တော်က internet ဆိုင်မှာလာသုံးတဲ့(မခင် တခင် ) သူတွေဆီကဆို တောင်းရမှာအရမ်းအားနာတယ် ။ သူတို့ကလဲ အလိုက်သိသိ မပေးကြတော့ ကိုယ်ကပဲစိုက်ပေးလိုက်ရများပါတယ် ။ ( မစိုက်ပေးလဲ စာရင်းက ကွာမှာကို )
ကိုနည်ရဲဇော် ပြောသလို “ဟင့်အင်း” ပြောတတ်အောင်တော့ အများကြီသင်ယူရအုံးမှာပါ၊
အားနာတယ်ဆိုတာလည်း သူ့နေရာနဲ့သူ ရှိပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်က မကူညီနိုင်တဲ့အခါမျီုးတွေမှာ ဟင့်အင်းလို့ ပြောလိုက်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ နောက်တစ်ချက်က ကူညီသင့်တယ်လို့ထင်ရင်တော့ မအားလည်း ရေဆုံးရေဖျား ကူညီလိုက်တာ အကောင်းဆုံးပဲ။ အင်းနဲ့ ဟင့်အင်းက နှစ်မျိုးပေမယ့် သူ့နေရာနဲ့သူ သုံးလိုက်ရင် မိတ်ဆွေစစ်တွေ တိုးပွားလာလိမ့်မယ်လို့ မနော ရဲရဲကြီး အာမခံပါတယ်။ တကယ်မခင်တဲ့သူကတော့ နည်းနည်းလေး စကားမှားလည်း မခေါ်မပြောနိုင်တွေ ဖြစ်တတ်ကြတာ ကြုံဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ကိုယ်ကခွင့်လွှတ်လိုက်ရင် အေးချမ်းလှပါတယ်ရှင်။
ကိုနည်ရဲဇော် ရဲ့ ပို့ စ်ကို ဖတ်အပြီး
မောင်ပေ အမြဲတမ်း “ဟင့်အင်း” လို့ ငြင်းခဲ့သော၊ငြင်းမည်ဖြစ်သော
ဖြစ်ရပ်လေးများကို ပြန်လည် ရေးပြချင်ပါသည် ။
“ ညီလေး ဒီထိုင်ခုံ ” လူရှိ ” လား ”
“ ဟင့်အင်း…မသိဘူးဗျ ”
“ အကိုရေ..နောက်အင်္ဂါအားလားဗျ ”
“ ဟင့်အင်း ၊ ရှေ့ အင်္ဂါပဲအားတယ်ဗျ (လာမည့် အပါတ်အင်္ဂါနေ့ ကို ဆိုလိုပါသည်) ”
အကိုကတော့ လူမိုက်ပြောပြော ဘယ်လိုဘဲသတ်မှတ်သတ်မှတ် မလိုလားအပ်တဲ့
ဟင့်အင်း ဆိုတာကို သင်ထားရုံတင်မကဘူး လွယ်လွယ်ကူကူပြောနိုင်အောင်ကို လေ့ကျင့်ထားပါတယ်။
လူလူခြင်းပေါင်းသင်းဆက်ဆံရာမှာလဲ ကိုယ်နဲ့အဆင်မပြောလောက်ဘူးလို့ စိတ်ထဲမှာခံစားရရင်
တစ်ခါတည်းကို ဟင့်အင်း လိုက်တော့စိတ်ထဲမှာေ နရထိုင်ရတာ စိတ်ရှင်းတယ်ကိုယ့်လူ။
အားနာလို့ ဆိုပြီး မလုပ်ချင်ဘဲ လုပ်ရ မဆက်ဆံချင်ဘဲ ကျိတ်မှိတ်ပြီးဆက်ဆံနေရတာထက်စာရင်
ဟင့်အင်းလို့ ငြင်းထဲ့လိုက်တာ တစ်ခါတည်းကိစ္စပြီးတယ်။
ဟင့်အင်း………………သုံးသင့်တဲ့နေရာမှာ ပြတ်ပြတ်သားသား သုံးရမယ်နော်
ဟုတ်တယ်ကိုပေါက်ရေ။ ကျွန်တော်လည်းအဲဒီလိုခံစားရလို့ အခုကစပြီး ငြင်းသင့်တာကိုငြင်းဖို့ ကျိုးစားနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း လောလောဆယ်တော့မအောင်မြင်သေးဘူး။
အန်ကယ်ကြီးနေရာမှားပြီး လာရေးပီ ဟီးဟီး
အားနာတတ်တဲ့ လူက အခွင့်ကောင်းယူတတ်တဲ့ လူနဲ့တွေ့လျှင် မရှုမလှခံရတာပါပဲ … ။
အားနာသင့်တဲ့ နေရာမှာပဲ အားနာပါ … ။ ကိုယ်အဆင်မပြေတာကြီးကို ယောင်ရမ်းပြီး အားနာမယ်ဆိုလျှင် … ကိုယ့်ဒုက္ခကိုယ်ရှာသလို ဖြစ်နေတော့မယ် ။
အားနာတယ်ဆိုတာ virus တစ်မျိုးပဲ/
ဒီ virus ၀င်နေလို့ အားနာနေကြတာ အဲဒါ မြန်မာ/
ဆင်ခြင်ဥာဏ် antivirus software နဲ့ သတ်
သေရင် ဘယ်တော့မှ အားမနာ/
အန်ကယ်ဂျီး မျက်မှန်ပါဝါတိုးတော့ နော်
အားနာသင့်တဲ့ နေရာမှာ အားနာပြီး အားမနာသင့်တဲ့နေရာဆိုရင်တော့ ပြတ်သားဖို့ လိုပါတယ်။ အားနာရင် ခါးပါတယ် ဆိုတဲ့ စကားပုံတောင် ရှိသေးတာပဲ။
တစ်ခါတစ်လေမှာ သူမှားနေတာကို သူပြောတာ မဖြစ်နိုင်တာကို အားနာပြီး “ဟုတ်ကဲ့ပါ”
ပြတ်ပြတ်သားသား နဲ့ “ဟင့်အင်း”လုပ်မှ
အဲဒီလူက သူမှားတာကို ရိပ်မိမယ်လေ။
ပြောသာပြောတာ တစ်ချို့က ကိုယ်ဘာမှားသွားလဲ မစဉ်းစားဘဲ
မလိုက်လျှောတဲ့သူ ဟင့်အင်း ငြင်းတဲ့သူကတောင် သဘောထားမကြီးသူလို့ အမည်ဆိုးတတ်ခံရတယ်ဗျာ။
ဒါပေမယ့် ပြတ်သားသင့်ရင် ပြတ်သားတာ နောင်သံသရာမရှည်တော့ဘူး။
တစ်ချို့ ကြတော့ လည်း
ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဘာမှလည်း မဟုတ်ဘဲနဲ့ 
ကိုယ်၌အစွမ်းရှိလား ဆိုတော့ လည်း မရှိပဲနဲ့ 
ကိုပေါက်ပြောသလို သံသရာမရှည်ဖို့ ပြတ်ပြတ်သားသားလုပ်ရမှာပဲ
တချို.သူတွေက တစ်ခါဟင်.အင်းလိုက်ရင် အခါတစ်၇ာလောက် ကူညီခဲ.တာကိုမေ.ပစ်နိုင်ကြပါတယ်…..
ဒါကြောင်. ဟင်.အင်းခဏတိုင်း သုံးဖို. အားမနာတတ်တော.ဘူးပေါ..